Siyaasiga Daahir Xaaji Boqore ayaa ku dhaliilay Dowlada Soomaaliya inaysan ugu danbeyn Deegaanada Beelaha Direed kalana hadasho Cid aan u dhalan Deegaankooda. | Salaan Media
Siyaasiga Daahir Xaaji Boqore ayaa ku dhaliilay Dowlada Soomaaliya inaysan ugu danbeyn Deegaanada Beelaha Direed kalana hadasho Cid aan u dhalan Deegaankooda.
Siyaasida Daahir Xaaji Boqore ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Dowlada ay kula shirto Addisababa Hogaamiyaha Raskambooni Sheekh Axmed Madoobe oo hogaamiya Garab kamida Garabyada Jubbaland isagoo sheegay in uusan deegaanka u dhalan kuna gorgortami karin meel uusan laheyn wuxuuna sheegay in isaga iyo Faroole ay tahay in looga yeedho maxkamad ay dagaalka ka abaabuleen Magaalada Kismaayo oo aysan Deegaan u laheyn.
Mudane Daahir Xaaji boqore oo ka hadlayey shir baryahan u socday Beelaha Direed ayaa sheegay in Beelaha Direed xiligan ay usocdaan Shirar ay uga arinsanayaan aayahooda kuwaa oo ka socda gudaha iyo dibada ayuu yiri isagoo sii raaciyey in ay tahay waqti ay usoo jeesteen in ay deegaanadooda ka dulqaadaan wax uu ugu yeeray soo duulayaal qaadanaaya deeganadooda .
Siyaasigan ayaa sidoo kale sheegay in waxa kismaaya ka dhacaaya iyo tan shabeelada hoose ka socota ee shaar dowladeed inta loosoo labistay la rabo in Beelaha Direed lagu gumaado aysan waxba u kala badalneyn si isku midana ugu diyaar garoobeen in ay dib ula soo noqdaan awoodooda.
Mudane Daahir Xaaji Boqore ayaa ugu baaqay in ay Dowladu joojiso wadahadalka ay kula jirto dad aysan ka go`in talada Waamo ayna fuliso shirkii ay ku baaqday kaasoo ay tahay ayuu yidhi in ay hogaan ka noqdaan Beelaha Direed madama ay yihiin kuwa og cida dagta iyo cidaan dagin.